Etihad Airways waxay ku kordhisay barnaamijka caalamiga ah ee 'Verified to Fly document document initiative'
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jebinta Wararka Imaaraadka » Etihad Airways waxay ku kordhisay barnaamijka caalamiga ah ee 'Verified to Fly document document initiative'
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Jebinta Wararka Imaaraadka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • Investments • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Tijaabooyinkii ugu horreeyay waxay muujiyeen in Verified to Fly Guests ay arkeen waqtiyadii ay shaqeynayeen miiska jeegga oo ku dhowaad kala bar ah iyo celceliska waqtiga safafka ee dhammaan Martida oo yaraaday.
Rakaabka safarka ah ee la xaqiijiyay waxay ku raaxeystaan ​​hubinta socodka degdega ah ee garoonka diyaaradaha iyada oo loo marayo Verified to Fly desk oo loogu talagalay khibrad dhakhso leh oo fudud.
La bilaabay bilawgii Juun, Verified to Fly ayaa cadeeyay aalad guuleysata oo ka caawineysa dadka inay ku noqdaan safarka.
Dhammaan rakaabka Etihad waxaa lagu dhiirigelinayaa inay booqdaan Maareeynta Buuggayga si ay u soo gudbiyaan dukumiintiyadooda.
Etihad Airways waxay kordhisay hindisaha dukumiintiga safarka 'Verified To Fly', taasoo u saamaxaysa dadka safarka ah inay ku ansixiyaan dukumiintiyada safarka ay ku safrayaan ee loo yaqaan 'Covid-19' ka hor inta aysan imaan garoonka diyaaradaha, iyo marinnada ay maraan shabakadooda caalamiga ah.
Loo heli karo inta badan Etihad Airways duullimaadyada, si loogu isticmaalo diiwaangelinta rakaabka adeegga Verified to Fly adoo booqanaya Maareynta Buuggayga oo aad raacdo tilmaamaha fudud ee ah inaad soo rarto oo aad soo gudbiso dukumintiyada safarkooda. Martidu waxay heli doonaan xaqiijin marba hadii dukumiintiyadooda la ansixiyo si waafaqsan shuruudaha dowlada waxayna u safri karaan garoonka diyaaradaha kalsooni iyo xasilooni maskaxeed, iyagoo og inay soo buuxiyeen dhamaan shuruudihii lagama maarmaanka ahaa ka hor duulimaadkoodii.
Iyada oo qaab-dhismeedku ka baxsan yahay jidka, socdaalayaasha la xaqiijiyey waxay ku raaxaystaan ​​hubinta socodka degdegga ah ee garoonka diyaaradaha iyada oo loo marayo heeganka Verified ilaa Fly miiska si khibrad dhakhso leh oo ka fudud loo helo. Tijaabooyinkii ugu horreeyay waxay muujiyeen in Verified to Fly Guests ay ku arkeen waqtiyadii ay ku shaqeynayeen miiska jeegga oo ku dhowaad kala badh iyo celceliska waqtiga safafka ee dhammaan Martidu yareeyeen - caawinta dardargelinta safarrada iyo joogteynta kala fogaanshaha bulshada ee garoonka diyaaradaha.
La bilaabay bilawgii Juun, Verified to Fly ayaa cadeeyay qalab guul leh oo dadka ka caawinaya inay ku soo laabtaan safarka, iyagoo siinaya rakaabka kalsooni inay haystaan ​​dukumiintiyada lagama maarmaanka u ah inay la kulmaan sharciyada safarka ee la xiriira COVID ee dowladda si loogu oggolaado inay duulaan. Faa'iidada muhiimka ah ee barnaamijka 'Verified to Fly' ee Etihad ayaa ah in rakaabku ay kaliya xogtooda la wadaagayaan shirkadda diyaaradda lafteeda, iyadoo aysan jirin cid saddexaad oo ku lug leh.
John Wright, Madaxweyne Ku-Xigeenka Madaarada Caalamiga ah iyo Hawlgallada Shabakadda, Etihad Airways, ayaa yiri: “Verified to Fly waxay si weyn u caan baxday martidayadu, maadaama ay helayaan khibrad dhaqso leh marka ay garoonka soo galayaan haddii ay isticmaalayaan Verified to Fly. Ka saarida shaqada mala awaalka hawsha, martida sidoo kale waxay qiimeeyaan hubaasha ah in markay yimaadaan garoonka diyaaradaha, ay horay u buuxiyeen dhammaan shuruudaha safarka ee COVID.
"Waan ku faraxsanahay in xilliyadan ay caqabado ku yihiin dadka safarka ah tani waxay ahayd qorshe muhiim ah oo lagu fududeynayay safarada martidayada sida ugu macquulsan."
Dhammaan rakaabka Etihad waxaa lagu dhiirigelinayaa inay booqdaan Maareeynta Buuggayga si ay u soo gudbiyaan dukumiintiyadooda. Marka gudbinta ay hubiso kooxda Verified to Fly team, martida waxay heli doonaan emayl 'guul' ah haddii dukumiintiyadooda ay buuxinayaan shuruudaha dowladda. Haddii shuruudihu maqan yihiin ama aan la buuxin, martida waxaa laga codsan doonaa inuu dib-u-soo diro ama u hubiyo dukumiintiyadooda.